Duqa Muqdisho oo shir caalami uga qeyb galaya magaalada Rome (Sawirro) | Jowhar Somali News Leader
Duqa Muqdisho oo shir caalami uga qeyb galaya magaalada Rome (Sawirro)
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa gaaray magaalada Rome ee dalka Talyaaniga, halkaasoo uu maalinta berri uga qeyb galayo shirka Caalamiga ee magaalooyinka Afrika.
Guddoomiye Taabid ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Rome ku soo dhoweeyay Safiirka Soomaaliya u fadhiya Talyaaniga iyo Mas’uuliyiin kale, waxaana hadal kooban uu saxaafada ku siiyay garoonka uu Guddoomiyaha sheegay inuu ka qeyb galayo shirka ku saabsan magaalooyinka Afrika oo ah mid muhiim ah.
Shirkan ayaa looga hadlayaa magaaleynta iyo koritaanka qaarada Afrika, iyadoo ay ka qeyb galayaan Duqa magaalooyin, Maamulo, Wasiiro ka socda Africa iyo talyaaniga, Cilmi baarayaal, hey’ado iyo ururo caalami ah.
Ka qeyb galka shirka ka dhacaya magaalada Rome ayaa ka dhigan in magaalada Muqdisho ay dib ula soo noqotay matalaadeeda Caalamka, isla markaana ay soo muuqato fagaarayaasha iyo shirarka caalamiga.
Magaalada Muqdisho oo ah Caasimadda Soomaaliya ayaa sanadihii u dambeeyay ka soo kabaneysay burburkii, iyadoo Maamulka uu hoggaaminayo Guddoomiye Taabid ay sameeyeen horumaro la xiriira dhanka maamulka, adeega bulsho iyo dowlad wanaaga.
Soo dhoweynta Guddoomiye Taabid
Previous articleRa’iisul Wasaaraha oo la kulmay Guddi Culimo oo Kenya iyo Uganda lacago ka soo uruuriyay
Next articleWararkii ugu dambeeyay doorashada Somaliland